၂၀၁၈ ရဲ့နှစ်ဝက်အတွင်းမှာ ရောင်းအားအကောင်းဆုံးအဖြစ်ရပ်တည်နေတဲ့ ကားအမျိုးအစားများ – AutoMyanmar
၂၀၁၈ ရဲ့နှစ်ဝက်အတွင်းမှာ ရောင်းအားအကောင်းဆုံးအဖြစ်ရပ်တည်နေတဲ့ ကားအမျိုးအစားများ
အခု ၂၀၁၈ ခုနှစ်ရဲ့ နှစ်ဝက်ကျော်လောက်ကိုရောက်နေပြီဆိုတော့ နှစ်ဝက်အတွင်းမှာ ဘယ်ကားမော်ဒယ်အမျိုးအစားတွေက Best-selling အဖြစ်ရပ်တည်ခဲ့လဲဆိုတာ သိရှိနေရပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့မှာတော့ ကျွန်တော် Automyanmar ကသိရှိထားတဲ့ နှစ်ဝက်အတွင်းမှာ Best-selling ကားအဖြစ်ရပ်တည်လျက်ရှိတဲ့ ကားမော်ဒယ် ၁၀ မျိုးကို ဖော်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်ဝက်ဖြစ်တာကြောင့် ဇန်နဝါရီလကနေ ဇွန်လအတွင်း ရလဒ်တွေကိုအခြေခံထားမှာဖြစ်ပါတယ်။
၁၀. Chevrolet Malibu
Chevrolet Malibu ကတော့ ၂၀၁၈ နှစ်ဝက်အတွင်းမှာ 76,417 units အထိရောင်းချနိုင်ခဲ့ပြီး Best-selling ကားမှာ နံပါတ် ၁၀ နေရာကနေ ရပ်တည်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အခု ၂၀၁၈ နှစ်ဝက်ရဲ့ရောင်းအားရလဒ်ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၇ ခုနှစ်တုန်းကနဲ့ ယှဉ်ရင် ၈.၉ ရာခိုင်နှုန်းလောက်အထိကျဆင်းသွားပေမယ့် လက်ရှိအချိန်အထိ Best-selling စာရင်းထဲမှာပါဝင်နေသေးတာမို့ မဆိုးလှတဲ့အနေအထားတစ်ခုလို့ ဆိုရမှာပါ။
ဒီနှစ်မှာ Chevrolet အနေနဲ့ Malibu ကို အပြင်ပိုင်းဒီဇိုင်းအနေအထားနဲ့ Feature အသစ်တွေထပ်မံထည့်သွင်းထားတဲ့ Grade တစ်ခုကိုထုတ်လုပ်ခဲ့သလို Sporty new RS model အသစ်တစ်ခုကိုလည်း ထုတ်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
၉. Chevrolet Cruze
Chevrolet Cruze ကတော့ ၂၀၁၈ နှစ်ဝက်အတွင်းမှာ 77,691 units အထိရောင်းချထားနိုင်ခဲ့ပြီး Best-selling ကားစာရင်းရဲ့ နံပါတ် ၉ နေရာရောက်ရှိနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Chevrolet အနေနဲ့ Cruze ကိုတော့ Sedans, Hatchbacks, Diesel, Gas အစရှိတဲ့အမျိုးအစားပေါင်းစုံထုတ်လုပ်လျက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ သူလည်း Malibu လိုပဲ ရောင်းအားရာခိုင်နှုန်းဟာ ၂၀၁၇ နှစ်ဝက်တုန်းကထက် ၂၆ ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကျဆင်းသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
၈. Ford Fusion
Ford Fusion ကတော့ ၂၀၁၈ နှစ်ဝက်အတွင်းမှာ 86,978 units အထိရောင်းချထားနိုင်ခဲ့ပြီး Best-selling ကားစာရင်းရဲ့ ၈ နေရာမှာရပ်တည်လျက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ ရောင်းအားအခြေအနေက ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကထက် ၁၈.၉ ရာခိုင်နှုန်းအထိကျဆင်းသွားပြီး သူနဲ့အလားတူအမျိုးအစား Ford မော်ဒယ်တွေဖြစ်တဲ့ The Focus, C-Max, Taurus နဲ့ Mustang တို့လည်း ကျဆင်းသွားတယ်လို့ သိရပါတယ်။
၇. Hyundai Elantra
Crossovers ကားတွေ မာကတ်ကို နေရာယူထားတာဖြစ်ပေမယ့် Hyundai Elantra line up ကတော့ ၂၀၁၈ နှစ်ဝက်အတွင်း 99,728 units ရောင်းချနိုင်ပြီး Best-selling ကားအမျိုးအစား စာရင်းမှာနေရာယူထားနိုင်ထားတုန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။
၆. Nissan Sentra
Nissan Sentra ဟာတော့ ၂၀၁၈ နှစ်ဝက်အတွင်းမှာ 115,676 units အထိရောင်းချနိုင်ခဲ့ပြီး ရလဒ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်ကထက် ၂.၈ ရာခိုင်နှုန်းအထိမြှင့်တက်လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က မော်ဒယ်ကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေမလုပ်ရသေးပဲ ရောင်းအားကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကထက် မြှင့်တက်လာတာကြောင့် အခြေအနေကတော်တော်လေးကောင်းနေတယ်လို့ဆိုရမှာပါ။ Sentra ကအခြေအနေကောင်းနေပေမယ့် တခြား line-up တွေဖြစ်တဲ့ Altima, Maxima, GT-R ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကထက် ကျဆင်းသွားမှုတွေရှိနေတယ်လို့ သိရပါတယ်။
၅. Nissan Altima
Nissan Altima ဒီနှစ်ဝက်ရောင်းအားဟာ ပြီးခဲ့နှစ်ဝက်ထက် ၁၅ ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကျဆင်းသွားပေမယ့် 123,792 units ရောင်းချနိုင်မှုနဲ့အတူ ရလဒ်ကောင်းနေတဲ့ Nissan Sentra ကိုတောင်ကျော်တက်ပြီး Best-selling ကားစာရင်းမှာပါဝင်လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိ တိုးမြှင့်မှုတွေပြုလုပ်ထားတဲ့ 2019 Alitma မှာ မှာဆိုရင် All-Wheel drive နဲ့ New VC-Turbo engine option ပါဝင်ပါတယ်။
၄. Honda Accord
Responsive ဖြစ်တဲ့ Chassis, မြန်ဆန်လှတဲ့ acceleration နဲ့ သက်သောင့်သက်သာရှိလှတဲ့ အတွင်းပိုင်းအနေအထားဖြစ်တဲ့ Redesigned Honda Accord ကတော့ ၂၀၁၈ နှစ်ဝက်အတွင်းမှာ 138,290 units အထိ ရောင်းအားအခြေအနေရှိနေပြီး Best-selling ကားစာရင်းမှာ နံပါတ် ၄ နေရာကလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဝယ်သူတွေအနေနဲ့ လက်ရှိအနေအထားမှာ Honda CR-V လို ကားမျိုးဘက်ကို ပိုမိုစိတ်ဝင်စားဝယ်ယူမှုတွေရှိနေတာကြောင့် Accord ရဲ့ ဒီနှစ်ရောင်းအားဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၇ ကထက် ၁၃ ရာခိုင်နှုန်းလောက် ကျဆင်းသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
၃. Toyota Corolla
Corolla ကတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ အနှစ် ၅၀ ကျော်လောက်ကတည်းက Sedan ကားအမျိုးအစားထဲမှာ သတင်းကောင်းတွေပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ Toyota မော်ဒယ်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့လို သတင်းကောင်းတွေပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ Toyota Corolla ဟာတော့ Corolla sedan နဲ့ Corolla iM hatch ဆိုတဲ့ Grade နှစ်မျိုးနဲ့ ၂၀၁၈ နှစ်ဝက်အတွင်းမှာ 161,462 unit အထိရောင်းချနိုင်ခဲ့တဲ့ Best-selling ကားစားရင်းကိုရောက်ရှိလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
၂. Honda Civic
Honda Civic ကတော့ ဒီနှစ်ဝက်အတွင်းမှာ 176,242 unit အထိရောင်းချနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး Best-selling ကားစာရင်းထဲမှာ နံပါတ် ၂ နေရာ အထိရောက်ရှိလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူက Accord လိုမျိုး အရင်နှစ်ကထက်ရောင်းအားရာခိုင်နှုန်း ကျဆင်းသွားတာမျိုးမရှိပဲ Best-selling list ထဲမှာပါဝင်လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
၁. Toyota Camry
Toyota ရဲ့ Camry ကတော့ America’s best-selling sedan စာရင်းထဲမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ မော်ဒယ်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ အခုလက်ရှိမှာ Camry မှာ Four and Six cylinder powertrains နဲ့ TNGA platform တို့နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ eighth generation မော်ဒယ်အထိထွက်ရှိပြီးနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ Camry ရဲ့ ၂၀၁၈ နှစ်ဝက်ရောင်းအားဟာ အရင် ၂၀၁၇ ခုနှစ်ကထက် ၁.၁ ရာခိုင်နှုန်းမြှင့်တက်လာပြီး Top Best-selling ကားအမျိုးအစားဖြစ်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
အပေါ်မှာဖော်ပြခဲ့တာတွေကတော့ ၂၀၁၈ နှစ်ဝက်ရဲ့ Best-selling car စာရင်း ရလဒ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၈ နှစ်တစ်နှစ်လုံးစာအတွက် Best-selling ကားစာရင်းကဒီအတိုင်းပဲဖြစ်နေဉီးမှာလား (သို့) ဘာတွေပြောင်းလဲသွားဉီးမလဲ ဆိုတာကတော့ စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေပါပြီ။